Inona no azo entina amin'ny entana any anaty fiaramanidina?
Fizahan-tany Ho an'ny fanamarihana
Afaka mandehandeha eran'izao tontolo izao amin'ny fomba maro ianao, fa amin'ny fotoana rehetra dia misy olona iray maka ny zavatra rehetra ilainy miaraka aminy. Raha mandeha eny an-tanety ianao, dia azonao atao ny maka ny zava-drehetra sy ny habetsahana azonao entina. Ho an'ny sidina eo amin'ny fiaramanidina, misy fitsipika sasantsasany momba ny fananganana ny entana. Ilaina mialoha ny mombamomba azy mialoha, indrindra raha efa manidina ianao vao voalohany.
Mba hisorohana ny fisian'ny toe-javatra mampidi-doza ho an'ireo mpandeha, ny airlines dia mandrara ny entana toy ireto:
poizina sy poizina (poisons any amin'ny fanjakana, asidra, moka);
lohahevitra miaraka amin'ny rohim-pihariana mihamitombo;
vokatra, indrindra fa mety;
fitaovam-piadiana sy bala rehetra, ary modely samihafa amin'ireny zavatra ireny;
fitaovana, ranon-javatra ary zava-borona afaka manafaingana na manangona afo (mifanaraka amin'ny zava-pisotro, zava-pisotro misy alikaola mihoatra ny 70 degre, pyrotechnics, ary koa ireo bàn-n'ny famonoana gazy na enti-mamono);
magnets amin'ny habe lehibe;
Ankoatr'izany, tsy voatery ny hametraka ny soatoavina ara-bola (vola, firavaka, fiarovana) ary ny antontan-taratasy rehetra, ary koa ireo zavatra madinika sy solosaina finday. Izany dia vokatry ny fiasan'ny fitaterana entana amin'ny fiaramanidina ary ny mety ho very.
Ny ambiny rehetra dia avela horaisina, saingy ilaina ny mifidy izay tianao haka, satria misy ny famerana ny lanjan'ny entana dia ny mpandeha. Ireo fampahalalana ireo matetika dia hita eo amin'ny tapakila. Amin'ny ankapobeny dia 20 kg ho an'ny kilasy ara-toekarena, 30 kg ho an'ny kilasin'ny orinasa ary 40 kg ho an'ny kilasy voalohany. Zava-dehibe ihany koa izany. Ho an'ny fitaterana maimaim-poana dia azo atao ny entana, izay ny halavany, ny halavany ary ny halavany dia tsy mihoatra ny 158 cm.
Matetika rehefa manamboatra valizy dia manontany ny fanontaniana hoe: Azo atao ve ny mitondra lasantsy sy fanafody ao anaty entana amin'ny fiaramanidina? Azo atao izany, saingy misy ny fepetra sasantsasany momba ny habetsahan'ny fitaterana (indrindra ny toaka). Ny fanafody fitsaboana dia tsy maintsy ilaina ao anaty fonosana voaisy tombo-kase ary apetaka amin'ny toerana iray.
Manao fitsangatsanganana miaraka aminao, tarihin'ny fepetra takian'ny fiaramanidina, karazana entana izay azonao entina ao anaty fiaramanidina, dia hisoroka ny zava-misy fa tsy handalo fitsapana mandritra ny fisoratana anarana izany ary tsy maintsy havela.
Volan'ny sidina mora indrindra - mamonjy amin'ny saina
Firenena 10 izay noforonina ho an'ny vehivavy fotsiny
Ahoana no hialana sasatra any Chypre?
Miankavia amin'ny ankizilahy
Ny tranonjaza kely dia kely
Ahoana ny fomba hamoahana mpiady amin'ny taratasy?
Raisins - votoatin'ny kaloria
Zava-kisoa - ny fomba mahavariana mahavelona amin'ny sakafo amidy vaovao
Vavaka ho an'ny hatsarana
Ny fitsaboana Phytolyacca - fitsaboana ampiasaina
Sarafara ho an'ny zazavavy feno
Sam Smith nisambotra noho ny fanorohana am-pitiavana niaraka tamin'ny sipany
Ahoana no hitiavana kilalao?
Patties amin'ny yogourt
Miditra ao amin'ny vina